रोचक Archives - Kavre Online
एजेन्सी- मानिसहरुका अनेक सोच तथा चाहना हुन्छन् । सुन्दा पत्याउन मुस्किल पर्छ । बेलाबखत यस्तै अनौठा घटनाहरु सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् ।एउटा विचित्रको घटना सार्वजनिक भएको छ जहाँ एक धनाढ्यले आफ्नी कुमारी छोरीसँग विहे गर्नेलाई साँढे ३ करोडको इनाम दिने घोषणा गरेका छन् । छोरीको बिहे गराउनका लागि थाइल्याण्डका एक धनाढ्य व्यापारीले अनौठो घोषणा गरेका हुन् । कन्याकुमारी छोरीसँग विवाह गर्ने केटालाई उनले उल्टै इनामस्वरुप २ लाख ४० हजार पाउण्ड (झण्डै ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ) दिने घोषणा गरेका हुन् ।तर ती व्यापारीले आफ्नी छोरीसँग बिहे गर्ने केटामा तीन योग्यता हुनुपर्ने सर्त राखेका छन् । पहिलो सर्त- केटा स्मार्ट हुन जरुरी नभए पनि पढ्न लेख्न जानेको हुनुपर्ने । दोस्रो- केटा मेहनती तथा लगनशील हुनुपर्ने । तेस्रो- केटा कन्जुस र फलहरूलाई माया गर्ने हुनुपर्ने । अर्नोन राडथोंग नामक ती धनाढ्य व्यापारीले आफ्नी कु
जब पाँच बर्षको छोरालाई न्यायाधिशले बाबुको फैसला गर्न लगाए
हरेक सन्तानले आफ्नो अभिभावकहरु सबै भन्दा माथि राख्ने अर्थात् अभिभावकहरु नै प्रेरणाको स्रोतको रुपमा लिने गरिन्छ। जति गलत गरे पनि आफ्नो आमा बाबु नै सत्य लाग्दछ । तर, अमेरिकाको रोड महाद्धिपमा न्यायाधिसले एक आरोपी पितालाई ५ वर्षको बच्चाबाट फैसला सुनाउन लगाएका छन् । बच्चाको बाबुलाई कार पार्कीङ गर्ने क्रममा नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा सजाय सुनाएको थियो । सजाय सुनाउने दिनमा आरोपीत व्यक्तिले आफ्नो सानो बच्चा साथमा लगेका थिए । त्यो बच्चामाथि न्यायाधिसको आँखा गयो र को हो भनी उनले सोधे । आरोपित व्यक्तिको छोरा भन्ने थाहापाएपछि न्यायाधीशले बाबुको र्फैसला सुनाउन लगाए । ती उनले तिनका छोरालाई ३ विकल्प दिएर प्रश्न सोधेका थिए । पहिलो तिम्रो पितालाई ९० डलरको सजाय , दोश्रो ३० डलर र तेश्रोमा बिना फाइन नै छाडीदिउँ भन्ने प्रश्नमा ती ५ वर्षे बच्चाले ३० डलर को जरिवाना लगाइदिन आग्रह गरे । त्यहा उपस्थित सबै दर्श
हामीले सपनामा के देख्न सक्ने कसैको नियन्त्रणमा छैन । सपना एउटा यस्तो सत्य हो जुन सबैका लागि सामान्य छ र हरेक व्यक्तिले जीवनमा कहिलेकाहीं सपना अवश्य देख्छ । आज हामी कुरा गर्दैछौं सर्पको सपनाको बारेमा । हो, सपनामा सर्प देखेर डराउनु सामान्य छ । यसलाई लिएर हाम्रो समाजमा थुप्रै प्रकारका विश्वासहरू छन् । धार्मिक ग्रंथहरूमा, सर्पको सपना लिएर धेरै कुराहरू भनिएको छ। आउँनुहोस जानौं सपना सँग सर्पको के सम्बन्ध हुन्छ । १, यौ न जीवन र सर्प: केही अध्यनहरुमा यो पनि भनिएको छ कि तपाईले सपनामा सर्प देख्नु र तपाईको यौ न जीवनको निकैं नजिकैको सम्बन्ध रहेको छ । यदि सपनामा सर्प तपाईंको ओछ्यानमा देखिन्छ वा सर्पसँग जोडिएको अन्य पुरात देख्नुभयो भने त्यसको सिधै असर तपाईंको यौ न ऊर्जासँग हुन्छ । साथै सपनामा सर्प देख्नाले तपाई आफ्नो यौ न साथिका बारेमा धेरै कुराहरु जान्न सकनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ । २, सर्प र समृद्
आफ्नी आमाका लागि बेहुला खोज्दै यी युवती
हाम्रो समाजमा जब छोरीहरु २०/२२ वर्ष पुग्दछन् तर बाबुआमाले उनीहरुका लागि योग्य वर खोज्न सुरु गर्दछन् । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि अवस्था त्यहीँ नै छ, आम रुपमा । तर अहिले सोसल मिडियामा भारतकी एकजना युवतीले तहल्का मच्चाइरहेकी छिन् । आफ्नी ५० वर्षे आमाका लागि ट्वीटर मार्फत योग्य बेहुलाको खोजी गर्दै उनले तस्वीर अपलोड गरेपछि त्यो भाइरल बनिरहेको छ । हो, ट्वीटरमा अहिले एकजोडी आमा छोरीको तस्वीर निकै चर्चित बनिरहेको छ । यो तस्वीर यसकारण विशेष छ कि त्यसमा देखिएकी छोरीले आमाचाहीँका लागि योग्य वरको खोजी गरिरहेकी छिन् । आस्था वर्मा नामकी ती युवतीले आफ्नी आमासँगको उक्त तस्वीर ट्वीटरमा पोष्ट गर्दै ५० वर्षकी आफ्नी आमाका लागि एकजना उपयुक्त श्रीमानको खोजी गरिरहेकी बताएकी छिन् । उनले आमाका लागि वरको खोजी गर्दै सम्भाव्य उम्मेदवारका सन्दर्भमा केही शर्त पनि राखेकी छिन् । उनका अनुसार उनको हुनेवाला पिता शाकाहार
श्रीमान श्रीमतीले यस्तो गल्तीले जन्मन सक्छ ते*स्रो लि*ङ्गी बच्चा
यो संसारमा धेरै प्रकारका मानिस हुन्छन , भनिन्छ मनुष्य भित्र २ प्रकारका मानिस हुन्छन , पुरुष र महिला , तिनिहरुमा यस्तो मान्छे पनि हुन्छन जुन हामी भन्दा केहि फरक हुने गर्छन ।जसलाई हामी ट्रांसजेंडर अर्थात तेस्रोलिङगी भन्छौं । वास्तवमा , ट्रांसजेंडरलाई पुरुष र महिलाहरुको कैटेगरीमा समावेश गर्न सकिदैन , यस प्रकारका मानिसहरुमा महिला र पुरुष दुवैको गुण समावेश हुन्छ । बाहिरबाट महिला जस्तो देखिए पनि भित्रि रुपमा पुरुषको गुण र आर्गन्स हुन्छन ।कुनै पनि बच्चा कसरी बन्छ त ट्रांसजेंडर डाक्टरहरुका अनुसार प्रेग्नेंसीको पहिलो तीन महीनाको अवधिमा शिशुको लिं’ग बन्ने गर्छ । यस्ता मानिस वााहिरबाट पुरुष देखिन्छन तर भित्रि रुपमा महिलाहरुको गुण हुन्छ , यस्तै बाहिरबाट महिला जस्तो देखिए पनि भित्रि रुपमा पुरुषको गुण र आर्गन्स हुन्छन ।कुनै पनि बच्चा कसरी बन्छ त ट्रांसजेंडर डाक्टरहरुका अनुसार प्रेग्नेंसीको पहिलो त
दक्षिणपूर्वी लण्डनका ३१ वर्षकी सिवोन र उनका ५१ वर्षे पती डीनले अब फेरि आमा बाबु बन्ने इन्छा म’रिसकेका थिए । सिवोनले आफैंउपचारमा समेत ध्यान दिन छाडेकी थिइन् । तर, उपचार नगर्ने हो भने दिदीको ज्यान जाने खबर सुनेपछि एली फेयरफाक्स आफ्नो गर्भ स्वयंमसेवाका रुपमा लगाउन हिचकिचाइनन् । ‘एलीले मलाई अंगालो हालिन् र सहजै भनि् कि तिम्रो लागि म बच्चा जन्माइदिन्छु’ आफ्नो लागि बहिनीले गरेको त्याग सम्झँदै सिवोनले भनेकी छन् । चिकित्सकीय पद्धतिबाट टेरीको वि’र्य प्रयोग गरेर एली गर्भवती भएकी छिन् रउनीहरु परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमन हुने दिन गनेर बसेका छन् । एलीले भन्छिन–क्यान्सरविरुद्ध लड्दै गरेको दिदीलाई देख्दा निकैगाह्रो हुन्थ्यो । त्यसमाथि आमा बन्न नसक्ने भन्ने थाहा पाएपछि उहाँ झनै निराश हुनु भो । त्यसैले उनका लागि बच्चा जन्माइदिनु मेरो लागि सहज निर्णय थियो । यो पनि: कुखुराको भालेले अन्धाधुन्ध आक्रमण गर्
काठमाडौं– गोत्रका विषयमा धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ । नेपाली समाजमा अधिकांशले हिन्धु धर्म मान्दै आएकाले पनि गोत्र महत्वपूर्ण विषय हो । जस्तो कि सहगोत्रसँग विहे गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? कुन गोत्रसँग मितेरी गाँस्ने, कुन–कुन गोत्र कुन जाति अन्तर्गत पर्दछन् ? आदि विषय तपाईंका लागि रूचिका विषय बन्न सक्छन् । विभिन्न ऋषिमुनिका सन्तानका नामबाट गोत्र राखिएको हुन्छ । गोत्र उनीहरूको कुल छुट्याउने एउटा भरपर्दो आधार हो । एकै जना बाट जन्मिएको ठानिने हुनाले एउटै गोत्र भएका मानिसहरुबीच विवाह चल्दैन ।हिन्दु समाजमा गोत्र शब्दले एक प्राचिन पुरुषको अविरल वंश परम्परालाई जनाउँछ, जुन माथिबाट तल तिर क्रमशः अटुट रुपमा बढ्दै जान्छ । अर्थात एक पुरूषको छोरा, नाति, पनाति, खनाति हुँदै हजारौं हजार वर्षसम्म चल्ने वंश पद्धति भन्ने बुझाउँछ । यसरी एक व्याक्तिबाट आरम्भ भएको वंश परम्परा अन्तर्गतका सबै सन्ततिहरू त्यही मुख्य प
चाहिने भन्दा बढी जे पनि हानिकारक हुन्छ । उखान यसै बनाएको होइन ‘घाटी हेरी हाड निल्नु’ । शरीरले पचाउन सक्ने क्षमता नहुँदा जिद्दी गरेर केही हुँदैन । उल्टै मृत्युको कारण बन्न सक्छ । यस्तै एउटा घटना घटेको छ भारतको उत्तर प्रदेशमा । उत्तर प्रदेशको जौनपुरमा एक व्यक्तिले हासी–मजाकमै ५० वटा अण्डा खाने बाजी लगाए । त्यही बाजी नै उनको मृत्युको कारण बनेको छ । उत्तर प्रदेशको बीबीगंज बजारमा ५० वटा अण्डा खाने शर्तमा सुभाष यादवको ज्यान गएको हो । शाहगंजको कोतवाल क्षेत्रस्थित धौरहरा गाउँका थिए उनी । गत शुक्रबार बेलुकी सुभाष आफ्ना एक साथीसँग बीबीगंज पुगेका थिए । जहाँ एक होटेलमा हासी मजाकमै उनीहरुबीच कसले कति अण्डा खान सक्छ भन्ने विषयमा कुरा चल्यो । तँ भन्दा म के कम ? भन्ने स्थिति आएपछि दुईजनाबीच एक बोतल म‘दिरा र ५० अण्डा जस्ले खान सक्छ उसले २ हजार रुपैयाँ जित्छ भन्ने बाजी लगाए । बाजी जित्नका लागि श
आ’त्मह’त्या गर्न झ्यालबाट हा’म फा’लेका श्रीमानलाई कट्टुमा समातेर श्रीमतीले गरिन् उद्धार !
काठमाडाैँ १९ कात्तिक- एक महिलाले डिप्रेसनबाट गुज्रिरहेका श्रीमानलाई आ’त्मह’त्या गर्नबाट जोगाएकी छन् । चीनको चाङ्चुनमा भएको सो घ’टनामा एक चिनियाँ महिलाले असाधारण तवरबाट आफ्ना श्रीमान्लाई आ’त्म’ह’त्या गर्नबाट जोगाएकी हुन् । ४५ वर्षीय श्रीमान् वाङ लीले अपार्टमेन्टको छैटौँ तलाबाट आ त्मह त्या गर्ने उद्देश्यले हा’म फा’लेका थिए । तर उनकी श्रीमतीले २० मिनेटसम्म श्रीमान्को कट्टुुसमातेर खस्नबाट जोगाइन् । लिङको चिच्याहट सुनेपछि तत्कालै मानिसहरू तल जमिनमा भेला भएका थिए । नाटकीय उद्धारपछि वाङलाई अस्पताल लगिएको छ ।
दुप्चेश्वर महादेव मन्दिर नुवाकोट जिल्ला को राउतबेसी गाविसमा अवस्थित धार्मिक पर्यटकीय स्थल हो । विशेषगरी जोडी जुराउन र सन्तान माग्नकै लागी यस स्थानमा भक्तजनहरु दुप्चेश्वर महादेव पुग्ने गर्दछन् । सदरमुकाम विदुरदेखि पूर्वमा रहेको राउतवेंशी गाविसको दुप्चेश्वर महादेवको मन्दिरमा यस्तो आस्था बोकेर जाने भक्तजनको आकर्षणले पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्वलाई उजागर समेत गरिरहेको छ । हरेक वर्षको पुस महिनामा धान्यपूर्णिमाका अवसरमा साताव्यापी विषेश मेला, शिवरात्री, साउन महिना तथा हरेक सोमबार दुप्चेश्वर मन्दिरमा मेला लाग्ने गर्दछ । यहाँ मुख्यतः सन्तान नहुने दम्पतिहरु सन्तान माग्न आउने र महादेवको भक्तिपछि दैवी शक्तिले सन्तान प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ । धान्यपूर्णिमादेखि एकसाता लाग्ने मेलालाई परम्परादेखि चल्दै आएको मेला नेपालकै सन्दर्भमा भने अलि अनोठो र फरक छ । ‘जे माग्यो त्यही पूरा हुने’